Zvidzidzo zvishanu uye Chakavanzika Chikuru kuBlogging Zvikurumidza Martech Zone
Muvhuro, Nyamavhuvhu 24, 2009 Svondo, October 4, 2015 Robby Kuurayiwa
Zana ramakore rechi19 hendibhiri
Kubudirira kushambadzira mishandirapamwe kunogona kutambanuka masvikiro akasiyana, iine mameseji akasiyana, kana kutariswa kune vanhu vakasiyana, asi vese vane chinhu chimwe chakafanana: ivo inofanira kukurumidza. Nzira chete yekukwikwidza ndeyekuvaka mushandirapamwe wako nekukurumidza uye kuwana zvekushambadzira kunze kune vatengi zvinobudirira Tora yakarebesa uye kushambadzira kwako kuita kwese kuraswa.
Kana uchigadzira zvemukati meblog, hwindo rinotowedzera. Chiitiko cheInternet chinogona kutora kumhanya izere kutenderera pamusoro penzira ye maawa mashoma. Kana Douglas Karr anga asina kukurumidza kusvetukira pa Brody PR fiasco, paisazove nenzvimbo yakawanda mukukurukura musoro wenyaya pano Martech Zone. Iyo yetsika: inoshanda blogger inofanirwa kuve inoteerera uye inobudirira.
Ku blogINDIANA 2009, ndakapa musangano pa Kubudirira uye Blogging. Iyo hurukuro yakatanga nezvidzidzo zvishanu zvakakosha izvo blogger yega yega inofanira kudzidza:
Anenge munhu wese anorega blogging. Maererano ne New York Times anoshamisa 95% emablog ese akasiiwa. Uhwu humbowo hukuru hwekuti kushomeka kwekugadzira kunouraya mabloggi.
Anoshamisa mabloggi akajairwa. Ese emablog makuru, angave ari akakurumbira mukurumbira kana kubudirira muniche, ari yakagadziridzwa zvinowirirana.
Hunhu hauna basa zvakanyanya. Blogger gara uchipokana kunyangwe girama uye chiperengo zvine basa, uye kazhinji zvinoratidza kuti mazhinji mablog mablogi anonhuwa.
Yekupedzisira posvo inokunda. Majini ekutsvaga uye vashandisi vanoteerera zvakanyanya kune izvo zvawanyora nhasi kupfuura zvawakanyora nezuro.
Tose hatina maturo. Yese blog blog yakanyorwa uye inoitwa pachena saka vamwe vanogona kuiverenga. Kubvuma kuti tinonyora nekuti tinoda kuti mazwi edu averengerwe kwakakosha kublogga.
Aya ekuona anotungamira kune mamwe ari pachena, asi akakosha mhedziso. Kana vangangoita vese varegedza blogging, pane iwe zvaunogona kukunda nekugadzirisa kusarega! Kana ma blogger makuru akaburitsa pane inoenderana purogiramu, kupfuura iwe yaunogona kujoina iwo matanho nekuita zvakafanana. Nekudaro, pane chakavanzika chikuru kublogga nekukurumidza. Dhizaina maitiro ekunyora mablog.
Hapana mabloggi maviri kana makambani anozove neicho chaicho chiitiko cheblogi, sezvo pasina maviri emakampeni ekushambadzira achazomboenzana. Asi pane akati wandei zvinhu zvinokodzera kutariswa
Kufananidza zvinyorwa: PaKuvandudzwa kweKuuraiwa, isu tine chaiwo mashanu mapoka ezvinyorwa: a mhinduro kune imwe blog, nhau-chinyorwa kana op-ed zvemukati, a pfupiso yechiitiko chatakatsigira kana kuenda, a kuenderera yeiyo yapfuura blog post, yakasarudzika mafungiro pane zvishoma ruzivo rwakajairika kana kutaura kwemazuva ese, kana an chiziviso yechiitiko chiri kuuya kana chiito chakarongwa. Kunyora blog kunoreva kutora chimwe chezvikamu zvishanu zvezvinyorwa, izvo zvinosunungura blogger kubva kuhurema hwekusaziva zvekunyora nezvazvo. Uyezve, unogona kutenderera zvikamu kuti uve nechokwadi chekuti hauzodzokore zvakanyanya.
Kuronga uye Kunetsa: Kubloga kunofanirwa kunge kuchikurukurirana. Kana iwe uri kushandisa maawa nemaawa uchigadzira yega ndima, iwe ungangodaro urikushaiwa poindi. Panzvimbo iyoyo, edza uye kuronga yako blogging nguva pamberi uye kuzvimisikidza iwe kune isingasvike maminetsi makumi matanhatu muchikamu chimwe chete.
Kupatsanurwa nebasa: Maitiro e kunyora blog yakasiyana zvakanyanya kupfuura fora blog. Saizvozvo, kugadzira mazano uye kunyangwe kugadzira yako "yekunyora karenda" kunoda chikamu chakasarudzika chehuropi hwako. Kana sangano rako rakakura zvakakwana, edza kugovera rimwe nerimwe remabasa aya kuvanhu vakasiyana. Kana iwe uri wega blogger, tsvaga mudiwa uye mutengesi mabasa. Zviri nyore kwazvo kugadzirisa mumwe munhu zvimwe shanda, uye zvakanyanya kunyaradza kuziva kuti chipangamazano anovimbwa achange achiongorora mazwi ako asati aburitswa.
Chikamu chakapera na demo rakashinga. Mushure mekukumbira zano kubva kune vateereri uye kutora munhu anozvipira kuti agadzirise, isu takaburitsa yakazara blog posvo mumasekondi 575. Uhwu ndihwo humbowo husingarambiki hwekuti iwe anogona blog nekukurumidza kana iwe uine system. Tarisa uone masiraidhi (direct link):
Kuti uwane rumwe ruzivo nezve dhizaini blogging maitiro ako kana ako kambani, udza mashoko Kukura kwekuuraya nhasi!
Tags: Bloggingblogging nekukurumidza
Aug 24, 2009 na11: 52 PM
Ini ndinoda mutsetse mumwe, Robby… "Anoshamisa mablogiki akajairwa." Vamwe vanhu vanopedza nguva yakawandisa kuyedza kuita kuti mablog avo afadze zvekuti vanopotsa poindi yeblog ... kuratidza vanhu nemavara ese ehupenyu hwedu hwezuva nezuva nebasa rakabatanidzwa. Tinoda kunzwa nezve kukanganisa, kunyangwe kutadza.
Aug 24, 2009 na9: 34 PM
Aya ese mapoinzi akanaka chaizvo, asi haisi iyo chete nzira yekuita zvinhu.
Ini handizoshandisa bhurogu yangu, kwandinofanira kutora 1, 2 kana kunyangwe mamwe mazuva pane mamwe machira anoda ruzivo rwakadzama rwehunyanzvi kunyora. Kunyangwe kunyorwa kwakadai chikamu chakakomba chekuti ini ndinosimbisa sei kutendeseka kwangu, ini handiwane traffic yakakwana kuratidza pfungwa yangu. Zvinogona kuratidza pfungwa yako pachinzvimbo…
Asi blog yaSteve Pavlina inoratidza pfungwa yangu. Steve nyora zvakanyanyisa kureba blog zvinyorwa. Anotyora mutemo wese wandakamboverenga nezve blog kutumira. Uye anowana traffic yakawanda kwazvo iye anofanirwa kuendesa zvirevo akananga kuforamu.
Ini ndinofunga inouya chaizvo kune simba iro blogger rinounza kwake kunyora. Kutevera iyo "mitemo" ine yakaderera simba, isingakurudzire mablog mablog inongoita senge kwandiri nzira yekundikana. Kuputsa mitemo nesimba rakawanda, zvemukati zvakakosha zvinoita sezvingangobudirira.
Ini ndichapa izvo mapfupi machira ari nyore kunyora kupfuura akareba mbiru. Zvimwe ndosaka vanhu vazhinji vachinyora zvipfupi pane kureba?